CC Shakuur: “Cabdi Xaashi wuxuu noqday dambi qariye, eed ka roge iyo asture….” | Caasimada Online
Home Warar CC Shakuur: “Cabdi Xaashi wuxuu noqday dambi qariye, eed ka roge iyo...
CC Shakuur: “Cabdi Xaashi wuxuu noqday dambi qariye, eed ka roge iyo asture….”
Muqdisho (Caasimada Online) – Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qoraal uu soo dhigay facebook uga jawaabay hadal dhowaan kasoo yeeray guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi, oo isku dayey inuu eeda dhiibistii Qalbi-Dhagax ka wareejiyo madaxweyne Farmaajo.
Cabdi Xaashi ayaa hadalka jeediyey maamlo un kadib markii Qalbi-Dhagax uu bixiyey wareysi xasaasi ah oo uu kaga hadlay gefki iyo xadgudubkii uga yimid Farmaajo.
Hoos ka aqriso jawaabta Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame
Gudoomiyaha Aqalka Sare mudane Cabdi Xaashi wuxuu ogolaaday in noqdo denbi qariye, eed ka roge iyo asture loo isticmaalay in uu eedda kiiska Qalbidhagax ka rogo madaxweyne Farmaajo kuna g eddiyo Sanbalooshe. Waase isku day si farsamo xumo ah loo soo qorsheeyey dhanka su’aasha loo dhigay iyo jawaabta uu Cabdi Xaashi bixiyey intaba.
Waraysiga Cabdi Xaashi waxaa lagu soo beegay maalmo yar ka dib waraysigii xanuunka badnaa ee la ii sheegay in ay Villa Somalia ka hurdi waysay ee uu bixiyey Qalbidhagax oo eed culus dusha ka saaray madaxweynaha.
Cabdi Xaashi wuxuu leeyahay Sanbalooshe ayaa marin habaabiyey madaxweynaha, haddii ay sidaa tahay muxuu madaxweynuhu xilka uga qaadi waayey Sanbalooshe oo xilka 3 oo kale sii hayey? Muxuuse madaxweynuhu u diidi waayey go’aanka ay xukuumaddiisu Qalbidhagax iyo ONLF ku sheegtay in ay argagexiso yihiin?
Haddii Cabdi Xaashi uu waraysigan bixin lahaa maalmihii doodda kiiska Qalbidhagax taagnayd, waxaan la is oran lahaa waa ka daacad wuxuu sheegayo, laakiin isagoo xog-ogaal u ah xaqiiqada dhacdooyinka isdaba taxnaa ee kiiska Qalbidhagax in uu si ula kac ah masuuliyadda uga leexiyo madaxweynaha kuna eed tiro waxey dhaawacaysaa shakhsiyaddiisa, wuxuuna ku gabood falay xilka uu ummada u hayo, wuxuu ku xadgudbay garaadka muwaadinka Soomaaliyeed.
Sababta keli ah ee uu Sanbalooshe eedda u saarayana, waa ‘miskiin baa miska la fuulo leh’, maadaama uusan haatan xil haynin, sababtoo ah intii uu Sanbalooshe xilka hayey Cabdi Xaashi marna kiiska Qalbidhagax kama hadlin, horayna weligii ugama hadal. Haddii dhiibistii Qalbdhigax ee shalay ay marada ka ridday waddani N&N, maantana waxay marada ka riday waddanigii Kacaanka.
Soomaaliyeed iska jira kaligiis waddani iyo kaligiis Islaam.